Ireo mpiambina afrikanina dia miady amin'ny famonoana olona noho ny aretina COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Ireo mpiambina afrikanina dia miady amin'ny famonoana olona noho ny aretina COVID-19
Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Miadia amin'ny famonoana olona
Ny areti-mandringana COVID-19 dia niteraka fitomboan'ny fihazana olona manerana an'i Afrika satria nihanaka hatramin'ny fetra ny mpiambina ny fiainana dia niteraka fanairana sy fanahiana ho an'ireo mpikatroka sy mpiaro ny tontolo iainana.
Fanadihadiana notontosain'ny charity charity, Tusk ary State Natural, dia nahita fa tsy hitan'ireo mpiambina afrikanina famantarana ny fanamaivanana.
Mihombo tokoa ny fanararaotana satria mihatra hatrany amin'ny fiarahamonina sy ny bibidia any Afrika ny areti-mandringana COVID-19.
Ny fanadihadiana dia nametra-panontaniana momba ny fikambanan'olona 60 manerana ny firenena 19 atsy Afrika.
Ny Tahiry fiarovana sy ny fiainana dia ao amin'ny Hwange National Park, Zimbabwe, dia nilaza fa nahitana fiakarana fandrika sy fandrika 8,000% teo anelanelan'ny Mey sy Jolay 2020.
“Nisy ny fiakaran'ny vidin'ny fisamborana mifandraika amin'ny ivoara nataon'ny ekipanay tamin'ny taon-dasa. Tsy hiala sasatra ireo mpihaza na dia eo aza ny areti-mifindra, ka anjarantsika ny mitazona ny asa sy ny lalam-pitondran-tena amin'ny fiarovana sy fikolokoloana ireo ekipantsika, "hoy i Nyaradzo Hoto, sergent ao amin'ny Fondation Iraisampirenena miady amin'ny famonoana poizina any Zimbaboe.
"Miorina mafy amin'ny fanoloran-tenanay izahay hitily ireo faritra midadasika izay nankinina taminay ary miaro ireo izay tsy afaka miatrika tena amin'ny mpihaza," hoy i Hoto nanampy.
Ny International Journal of Protected Areas and Conservation dia nahatsikaritra fa ny 78.5% amin'ireo firenena afrikanina nanaovana fanadihadiana dia nitatitra fa ny COVID-19 dia nisy fiatraikany tamin'ny fahafahan'izy ireo nanara-maso ny varotra bibidia tsy ara-dalàna, ary ny 53 isan-jato no nitatitra ny fiatraikany avo lenta avy amin'ny COVID-19 momba ny fahaizana manalefaka adin'ny olombelona sy ny biby.
Edwin Kinyanjui, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny vondrom-piarahamonina wildlife ao amin'ny Mount Kenya Trust any Kenya, dia nilaza fa mila mailo kokoa ireo mpiambina amin'ny taona lasa.
"Mirongatra ny hetsika tsy ara-dalàna noho ny fahaverezan'ny karama betsaka ary raha miady amin'ity hetsika ity dia atahorana ho voan'ny COVID-19 ny mpiambina," hoy i Kinyanjui.
“Ny fomba fangalarana hazandrano koa dia miha mandroso, ary mihombo ny rafi-pitsarana. Mandeha hatrany izahay satria takatsika fa ny zavatra tadiavintsika dia lehibe noho isika, ”hoy i Kinyanjui.
Tena ilaina famatsiam-bola ho an'ny fizahan-tany dia tao anaty krizy koa noho ny areti-mandringana. Ny mpitondra tenin'ny Fikambanana Zoolojika Frankfurt dia nilaza fa ny fiantraikan'ny COVID-19 dia tsapa ao amin'ny Nsumbu National Park any Zambia.
"Ity fihenan'ny fizahan-tany ity dia nisy fiatraikany tamin'ny asa sy asa fivelomana mifandraika ary nanome fanamby amin'ny fampifandraisana ny lanjan'ny natiora sy ny lanja amin'ny fianan'ny olombelona," hoy ny fiarahamonina.
Charity Rhino Ark, izay manampy ny valan-javaboary Aberdares any Kenya, dia nilaza fa ny fidiram-bolan'ny turista Wildlife Services ao Kenya dia nitontongana 96%, izay nahatonga ny fanapahana teti-bola ho an'ny fandaharan'asan'ny fiarovana ny ala sy ny ala.
Ao anatin'ny fikasana hamaha ny olana, ekipa maherin'ny 150 no mandray anjara amin'ny 2021 Wildlife Ranger Challenge, andiana olana ara-tsaina sy ara-batana niafara tamin'ny 18 septambra tamina hazakazaka 21 kilometatra namakivaky ny velaran-tany arovana sy miaro an'i Afrika. .
Ny vola voaangona dia handoavana ny saram-pandidiana ho an'ireo mpiambina 5,000 farafahakeliny, hahafahan'izy ireo manome izay ilain'ny fianakaviany sy miaro ny vondrom-piarahamonina sy ny bibidia any amin'ireo faritra tena marefo any Afrika.
"Ny Rangers no ain'ny ezaka fitehirizana antsika ary sarobidy loatra ka tsy ho resy", hoy i Judi Wakhungu, masoivohon'i Kenya any France, Portugal, Serbia, Monaco, ary ny Holy See.
Ny fampielezan-kevitra manohitra ny fanjonoana olona atsy Afrika dia mitaky tsy fahampiana vola matanjaka noho ny fahamaroan'ny mpizahatany mandritra ny areti-mandringana.
Tao Tanzania, iray amin'ireo firenena afrikanina manan-karena amin'ny bibidia, dia notaterina fa 33,386 5 ireo mpihaza no voasambotra tao anatin'ny XNUMX taona lasa noho ny fampielezan-kevitra miharo fanenjehana ataon'ny National Task Force Anti-Poaching (NTAP).
Tamin'io fe-potoana io ihany dia fitaovam-piadiana 2,533 no voasambotra; Raharaha 5,253 no natolotra tao amin'ny fitsarana; ary ny 914 dia nofaranana ka nigadra olona 1,600 XNUMX.